के तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / के तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक
admin July 31, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 28 Views
काठमाडौँ । आजकलको दौडधुँपको जीन्दगीमा हामी आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिदैनौ । जसको कारणले पछि हामीलाई नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मानिस आफ्नो तौललाई घटाउन चाहान्छन् । आफ्नो तौललाई कम गर्न कैयौँ खर्च गरेर जिम गई पसीना बगाउछन् ताकीँ तौल घटोस् तर जति गरेपनि तौल घट्नेको नाम नै लिदैन।
आज हामी तपाईलाई एक खास ड्रिंक लिएर आएका छौ जसलाई पिइसकेपछि तपाईको फिगर मेन्टेन गर्ने, पेटको बोसो घटाउने समस्या बिना मेहेनत नै घटाउन सकिन्छ । तपाईलाई यो ड्रिंक पिइएपछि धेरै समय कुरिराख्न पर्दैन केही दिनमा नै यो समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ।
२.१ इन्च अदुवा
अब यस ड्रिंकलाई १/२ मिनेटको लागी राख्नुहोस्, यसपछि यसलाई छान्नुहोस् ताकी ड्रिंक पिउदा तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो हँदैन । ध्यान दिनुहोस् कि यसलाई चिसो भएपछि मात्र छान्नुपर्छ ।
Previous यी ३ महिनामा जन्मनेहरु हुन्छन् धेरै भाग्यमानी, सधैँ दिन्छ भाग्यले साथ !
Next BREAKING NEWS:अब स्मार्ट लकडाउन